RIKOOOO MD11 SY 777 nidona
fanontaniana RIKOOOO MD11 SY 777 nidona
1 taona 8 volana lasa izay #599 by suythe
Hello Ry namana,
Efa mampiasa Rikooo A330 sy ny wonderfull, nefa tato ho ato dia niezaka vokatra hafa toy ny MD-11 sy 777
Ireo vokatra mitsahatra mahazo haavo indray mandeha nidona. raha ny sasany manuveors P3D dia loza.
Fanantenana I mahazo misy vahaolana izany.
1 taona 8 volana lasa izay #600 by Dariussssss
Hello teo ary Tonga soa eto amin'ny Rikoooo.
Izaho koa mampiasa azy rehetra tamin'ny FSX, tsy misy olana. Tsy maintsy ho azo antoka fa mampiasa fiaramanidina no mifanaraka amin'ny P3D. Rehefa hanokatra ny pejy, dia aoka ny hoe-MD-11, ho hitanao amin'izany; fa FSX & FSX-Steam & Prepar3D v1 (v2 & 3 ho fizahan-toetra), ka tsy maintsy ho azo antoka fa mifanaraka izany.
Tahaka izany hoe: v2 sy v3 ho fizahan-toetra, diso dia tena azo atao.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: suythe